Prof. Geeddi oo ugu baaqay dowlada in ay xaliyaan tabshada maamul Goboleedyada… – Hagaag.com
Prof. Geeddi oo ugu baaqay dowlada in ay xaliyaan tabshada maamul Goboleedyada…
Ra’iisul Wasaarihii hore ee dowladdii KMG aheyd Cali Maxamed Geeddi ayaa ugu baaqay dowladda Federaalka inay xaliyaan wixii tabasho ah ee ay qabaan maamul goboleedyada, si loo soo afjaro khilaafka ragaadiyay dowladda Dhexe iyo maamul goboleedyada.
Cali Maxamed Geeddi oo maalmahan ku sugnaa magaalada Kismaayo ayaa la sheegay inuu gogol xaar u ahaa wada hadalo iyo dhex dhexaadin la doonayo in laga dhex sameeyo dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada.
“Madaxda dowladda Federaalka, iyagaa laga rabaa wixii dhib inay xaliyaan, dowlad goboleedyada waa muhiim waa madax shacab deegaan soo doortay, dastuur u gaar ay ku doortaan oo qoraya qodobo cad cad, dalka waxaa ugu sareeya dastuurka Federaalka oo ah sharciga dalka lagu maamulayo”ayuu yiri Cali Maxamed Geeddi.
Waxaa uu sheegayin haddii aan dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada isla socon karin aanu dalka guulo badan gaari karin, ayna imaan karto dib u dhac.
Mr Geeddi ayaa ka codsaday dowladda Federaalka inay xalka keento, isagoo tusaale u soo qaatay in marka ay is qabtaan waalidka iyo carruurta xalka laga rabo waalidka, isla markaana dowladda Federaalka laga rabo inay gartaan mas’uuliyadooda iyo waajibaadkooda, ayna xaliyaan wixii khilaaf ee dalka ka jira.
Khilaafka dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa weli xal loo helin, iyadoo dowladda Federaalka lagu eedeeyay inay faragelin ku heyso maamul goboleedyada, si ay meesha uga saarto madaxda hoggaamineysa, oo ay keensato madax ay iyada raalli ka tahay.